အမ်အိုင်ဒီကုမ္ပဏီလီမီတက် | ဆောင်လုပ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အင်ဂျင်နီယာ
About MID Co., Ltd
MID Co., Ltd. အကြောင်း
Myanmar International Development Co. , Ltd ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နန်းတော်ကားငှားရမ်းခြင်း ၀န်ဆောင်မှုအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နန်းတော်ကားငှားရမ်းခြင်း၀န်ဆောင်မှုသည် ကားငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် အကြီးစားပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၀န်ဆောင်မှု၊ ဒေသတွင်းအလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ အကောက်ခွန်ကြေငြာချက်နှင့် ရှင်းလင်းရေးဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးကတည်းက ကုမ္ပဏီသည် အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုများစွာအတွက် အထူးဝန်ဆောင်မှုကန်ထရိုက်တာအဖြစ် သက်သေပြခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘောတရားခံယူချက် – MID ကုမ္ပဏီ၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် အမြဲစိမ်းနိယာမ၊ ရည်မှန်းချက်၊ တန်ဖိုးများ စသည်တို့ပါ၀င်သော “Evergreen Principle” မှ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များကိုသာမက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြုအမူများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိဥာဏ်ကို မြှင့်တင်ရန်လည်းလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ MID ၀န်ဆောင်မှုများသည် တောက်ပပြီး ထာဝရအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန် စွမ်းရည်ရှိသည်။
ခံယူထားသည့် တာ၀န် – မြန်မာပြည်ကို အရှိန်မြှင့်တက်လာစေရန်။
မျှော်မှန်းချက် – ၀ယ်ယူသူများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်လာစေရန်။
သဘောတရားခံယူချက် – ၀န်ထမ်းများနှင့် ကော်ပိုရိတ်ကျန်းမာရေးပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကောင်းဆုံးသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှစ်ခုလုံးအတွက် လူ့ဦးစားပေးသောနှစ်ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူမဟာဗျူဟာ။
တန်ဖိုးများ – သင်၏ အောင်မြင်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ။ ဖောက်သည်များ၏ စုစုပေါင်းစိတ်ကျေနပ်မှုမှ ရည်စူးပါသည်။
ကောင်းမွန်သောစစ်ဆင်ရေး – အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းမှုမရှိပဲ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးအချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု – အားကြီးသောသူသည် အားနည်းသူများနှင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ရပ်စဲရန် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ အသစ်များကိုလက်လှမ်းသည်။
ပိုင်းခြားသိမြင်မှု – အချိန်သည် သင့်အား အောင်မြင်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပြောပြလိမ့်မည်။
စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုနှင့်စွမ်းအင် – အသင့်တော်ဆုံးသောရှင်သန်မှု။
ဆောင်ပုဒ် – ကျွန်ုပ်တို့၏ အယူအဆလေးခု၊ လုံ့လဝီရိယရှိမှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ထိရောက်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။
အလုပ်သဘောတရားခံယူချက် – ဖောက်သည်များကို လေးစားကြောင်းပြသပြီး အောင်မြင်စေမည်။ ထူးချွန်ကျော်လွန်ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် ကြိုးစားကြသည်။.
More About MID Co., Ltd
MID Co., Ltd. Projects
MID Co., Ltd. News & Events
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ…
မြစ်ကြီးနား နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြစ်ကြီးနား)တွင် (၃)ထပ်စာသင်ဆောင် ( ၁၉၂’ x ၃၈’ x ၃၆’ ) RC ( ၁ ) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း…
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ M I D Co., Ltd. တို့သည် ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဗန်းမော်မြို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံး…
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ( ၂ )ထပ် တိုးချဲ့လူနာဆောင် (၁၅ဝပေ x…